Sidee lagu gaaraa guur farxad leh? | Somaliska
Rag iyo dumar badan oo iska qaba ayaa iskula dhaqma in ay yihiin cadow, halkii ay ka ahaan lahaayeen asxaab. Ninku waxa uu isleeyay adiga ayaa qeef ah waxkasta oo aad dhahdo waa in la qaataa halka xaasku ay is leedahay ninkaaga la tartan oo xitaa waxyaabaha wanaaga ah ee uu sameeya maku mahadceliso. Dumar badan ayaan la qancin karin oo baahidooda shaqsiyeed iyo mida qaraabadeeda aysan dhamaad lahayn. Raga qaar xaasaskooda si xun ayay ula hadlaan oo xitaa qaar ayaa gacan u qaada. Hadaba maxaa talo ah? 1. Horta waa maxay sababta guurka? Waxaa nasiib daro ah in dad badan aysanba fahansaneyn sababta guurka, sida uu ilaahey u macneeyay guurka asagoo ku tilmaamey naxariis iyo jeceyl. Balse dad badan ayaan taas fahmin oo guurka u qaatay cadaawad iyo is neceyb joogto ah. 2. Ha noqon kaligi taliye Walow ninka raga ah ilaahey ka dhigay magaxa reerka hadana ma ahan in uu noqdo kaligi taliye oo go'aankasta kaligii qaato. Waxaa raga laga doonayaa in ay dumarkooda si wanaagsan ula dhaqmaan. Rasuulka (SCW) ayaa laga wariyay in uu yiri "Muslimka ugu fiican xaga caqiidada waa kan dabeecada fiican leh, kuwa idinkugu dabeecada wanaagsanina waa kuwa dumarkooda si wanaagsan ula dhaqma" Tarmidi. 3. Ku shirkooba go'aanada. Markii go'aan ku saabsan la qaadanayo qoyska waxaa muhiim ah in wada tashi la sameeyo oo mid kaliya uusan go'aan iska gaarin. Go'aanka si wadajir ah loo wada gaaro qilaaf kama yimaado. Qofkastana waxa uu dareemayaa ahmiyada uu ku leeyahay qoyska. 4. Haku xadgudbin xaaskaaga Marnaba ha aflagaadeyn seygaaga ama xaaskaaga, haku dhihin hadal hoos u dhigayo maskaxdooda, ha u qaadin gacan Rasuulka (SCW) ayaa laga wariyay in uu yiri "Sidee ayaad u garaaci kartaan xaasaskiina maalintii sidii adoon habeenkiina ula seexan kartaan?" 5. Is xakamee markaad xanaaqdo Xanaaqa sheydaanka ayaa ka faaideysta. markaan xanaaqdo ha iska hadlin, oo haku hadlin hadalo aadan dhahdeen markaad caadi tahay. Markaad xanaaqdo ha hadlin sidaadaba, oo sug intaad ka dageyso. 6. Muuji dareenkaaga jeceyl Raga iyo dumarka Soomaalida waxaa laga lahyahay in ay isku muujiyaan dareenkooda jeceyl. xitaa markay magaalada marayaan waxay u socdaan sidii dadka kala cararaya. War ilaahey ayaa isku kiin xalaaleeyay, oo isku muujiya dareenkiina, ku dheh waan ku jecelahay macaanto /macaane. Muujinta dareenka jeceylka waxay kordhinayaan saaxiibtinimada qoyska. 7. La saaxiib xaaskaaga / seygaaga Qeybtaan waa muhiim, ma ogtaay waxyaabaha ay xaaskaaga xiiseyso ? waxaa muhiim ah in labada qof ee is qaba ay sxbo noqdaan oo midba midka kale ka warqabo, oo uu ogyahay waxyaabaha uu daneeyo, markaad ogtahay waxyaabaha uu seygaaga jecelyahay way fududahay in aad ku caawiso asaguna kugu caawiyo. 8. Muuji mahadcelinta Markii xaaskaaga ay sameyso wax wanaagsan u mahad celi oo u muuji sida aad ugu qanacsantahay hawsheeda. Ha dareensiin ninkaaga in uusan reerka faaido u lahayn oo waxyaabaha uu qabto ay macno daro yihiin, ilaa in uu macno daro yahay mooyee, waxkasta oo uu qabto u muuji mahadcelintaada iyo sida aad ugu faraxsantahay waxqabadkiisa. Haddii xaaskagaa dharka kuu dhaqdo , oo ay cuntada kuu kariso, oo ay ilmaha iskuulka geyso ha u qaadanin in ay si otomatik ah waxkasta u qabaneyso balse waa hawl weyn oo muhiim ay tahay in aad adigu booskeeda is dhigto ka dibna aad dareento hawsha muhiimka ah ee ay kuu hayso. 9. Kala shaqee guriga. Raga badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu yaqaanaa in aysan guriga waxba ka qaban oo ay aaminsanyihiin in ay tahay hawsha dumarka, balse arintaas waa qalad, waxaa muhiim ah in ragu ay xaaskooda ku caawiyaan guriga. Sidoo kale waxaa muhiim ah in dumarku aysan ka dhigin hawsha mid qasab ah balse aad isku daydo in aad ninkaaga ku xiiso galiso in uu hawsha guriga wax ka qabto. 10. Xiriirku waa muhiim MUHIIM MUHIIM MIHIIM! aad iyo aad ayuu xiriirku muhiim u yahay, waa in aad la hadashaa xaaskaaga, waa in aad la hadashaa ninkaaga oo aad u sheegtaa wixii dhibaato ah oo jira, haddii labada qof aysan wada hadlin oo aan laga wada hadlin cabashooyinka waxay tageysaa meel aan laga qaban karin. balse markii la wada hadlo waxaa la gaari karaa in xal la helo inta ay dhibaatadu yartahay. 11. Iska ilow wixii hore Haddii aad hore u dagaasheen ama wax kale ini dhex mareen balse laga heshiiyay marna ha soo qaadan. Fadlan iska iloow guud ahaan. 12. Haka dayrin waligaa noloshaad la daristahay Haka masayrin nolosha ay ku nool yihiin dadka idinka lacagta badan, dumar badan ayaa ragooda kadeeda ka dib markii ay ka masayreen nolosha dumar kale. Hoos u fiiri dadka kaa faqiirsan oo tusaale ku qaado ilaaheyna ugu mahadceli nicmadiisa. Kuna qanacsanaada noloshiina. 13. Ninkaaga waqti sii Rag badan ayaa ka cowda in xaaskooda ay telefoon ku waaleen, haddii uu ninkaaga daneysto ma ahan in uusan ku jecleyn ama uu ku qayaanayo balse waa muhiim in aad aaminto xaaskaaga ama ninkaaga oo aad u ogolaato waqti uu ku daneysto. 14. Qiro qaladkaaga Markaad qalad sameyso, qiro, oo raali galin ka bixi. Markii xaaskaaga ama ninkaaga uu qalad sameeyo u samee marmariso haka soo qaadin wax weyn oo u raadi xal. 15. Ha iloobin sariirta. Xiriirka galmada waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah guurka, waxaana muhiim ah in labada qof ay si wada jir ah ugu faraxsanyihiin oo ay u xiiseynayaan arintaas. Raga qaar waxaa dhacda ayagoo habeenkaas intiisa badan maqnaa in ay xaaskooda isaga galmoodaan ayagoon hawsha macayn. Sidaas looma baahna, galmada waa in laga dhigaa mid xiiso leh, oo la sii qorsheeyaa oo guriga la carfiyaa oo ay ka horeysaa dareen, jeceyl iyo istaabasho intaan hoos loo daadagin. 16. ilaali sirta qoyskaaga. Arintaan waa mid dadka badankoodu ay ogyihiin balse mararka qaar ayaa dhacda in xadka laga gudbo. Hakala sheegeysanin reerkaaga dadka kale, dumarka qaasatan waxay jecelyihiin in ay ninkooda uga sheegeeyaan dumarka kale, ha sameynin taas, arinta reerkaagu waa qaas. 17. Qoyska wanaagsani way isku sabraan. Sabarka, cafiska iyo isku dulqaadashadu waxay qeyb weyn ka yihiin badbaadada qoyska. Muhiimadu waxay tahay, ula dhaqan xaaskaaga/ninkaaga sida adiga aad jeceshay in lagula dhaqmo.
Masha’Allah waa talo dhaxal gal !! Masha’Allah .
masha alaah waa talo fiican.waxaan jeclahaay ina ku darsado figradeyda.gurka sidisaba.waa mid leysku samro.hadi an firino dadki hore.aad ayeey uu samar badnayeen.waqtigi ayeeyo yasheni.iyago 4 leyskula qabo ayeey.iska samri jiren.maantadaan la jogana.lacaag ayaa leyskula dhagaan yahay.caruurtiba waxaa ka qimo badnadaay lacaag.waxaa arke nin uu gursanayo naag sharci.ama cunigi lo dhalaay ku radsanayo sharci. diinta muslimka ma dhigeyso gur xalaala.inad ku gashiid warqad xun ama caruurta oo ugu qalisan dunida.ina ku raabtid.warqad xun.ilahey.ha naga dhigo kuwi ku dhaqmo xaga diinta.labadi qalocana haa so tosiyo.kuwi fiicnayana alle haa uu siyadiyo aamiin
waxaan u mahad calinaya qoraaga oo si fiican u soo diyariyeey ayana ka muuqato qiiro badan
Runtii markaa doonayso inaa ka hadasho maduuc waxaa is furaysa khanado badan oo u bahan in laga hadlo
marka waxaan jaclan lahaa inaan waydiiyo qoraaga iyo dhaman akhristayaasha 5 su,aal
1 waa maxay Guur?
2 waa maxay Ujeedada Guurka ?
3 waa maxay Sharuud Guur?
4 waa maxay Qurux Guur ?
5 Maxaa u dhaxeeya Guurka Muslimka iyo kan ummaddaha kale
fadlan waxaan kaa codsanayaa jawabta inaa ku soo qorto halkaan iyo inaa igu soo dirto emailka srvorg@hotmail.com
waxaan marlabad u mahad calianyaa dhamantiin asc
R,A,D: Waa ku mahadsantahay fariinta, adigaaba u muuqda mid haybad qoraa leh maad noo soo diyaarisid mowduuca oo aan ku soo daabacno Somaliska? Insha Allah mustaqbalka waan soo qori doonaa mowduucyo la xiriira nolosha, guurka iyo guud ahaan arimaha Bulshada.
Mohamad keinan says:
Waxad na farteen wanaag idinkuna wad ku mahadsan ti hiin inti is jecey qaata wa qodobo aas as u ah tiir ka nolosha xal ka manta wad aragtan dhisida mustaqbal ka aan ka run shegno
horta walaalayaashayda muslimiinta aha eesoomaalyeed waad idinsalaamayaa waanaad kmahadsantiin kaqaybqaadashada akhriska talooyinkan aadka uqiimahabadan ee wiil walaalkeen ahi uusoodiyaariyaya marlabaad ayaanaan idiin mahad celinayaa dhamaantiin waana qodobo aya dadbadan oodhaliyaro ah iyo kuwo aan dhalinyaro ahaynba ay ubaahnaayeen ale hakuubarakeeyo maskaxdaada walaal anbagana dhamaanteen sidookale ,,,,,,,
walaal kay R.A.d waxaan rabaaa shantaadaa su’aalood inaan fikirayga kadhiibto walaal sida ay ilatahay
walaal horta Guurku sid eebaheenba inoo cadeeyay ee kalaamkiisa kuxusan waa nolol aad iyo aad qimo badan oo uu ale kusheegay isudhamaystirka nim,cooyinka midkastaa xaga laka iyo dhadigaba.
allena subxaana wata’aala waxauu yidhi suuratul niasaa( iyagu hubay idiinyihiin adinkuna hubaad utihiin )
2:Ujeedada guurka : walaal sida ale inoosheegay ujedada guurka kuwa uuguwaawayni waa inuu qofka muslimka ahi kagabadbaado sino, inuu kahelofarxada dhamaystiran ,inuu maalka uu guqaalisan dunida ee alle subhaana wata’aala quraankiisa kusheegay uu kahelo (awlaad),,,,,e.t.c…..
4; quruxda guurku waa kow kalsoonida ,samirka ,hadalada kalgacalkaleh, iyo wanaagyada kale eelamidkaa ee qofka muslimkaa laguyaqaano
5:waxaa udhaxeeya guurka muslimka iyo kan umadaha kale mida koobaade guri dad iimaan koodu alekuxiranyahay micanaha (muslimiinah ) iyo dada aan ale uhoaansanayn walaal midaasa u wayn ,,,kolay qaarkale oobadana wayjiraan
jawaabahaas aan ugudbinayo walaalkay R.A.D waa intaa waxii ka khaldana sorry adaa habayn bro becous of waxaa qoray single man, so you keep it bro how it would be right ,
Abdifatah jamal says:
Mahadsanid wan layabey qoralkani weliba si gaara waxan ugu mahadcelina maskaxdi ey kaso maxatay e wada dadaalkina wad gareysan insha alah